Kungani inja yami izula izungeza? | Izinja Umhlaba
I-Encarni Arcoya | | Curiosities
Impela uqaphele ukuthi ezikhathini eziningi izinja zethu zibeka amakhanda azo odongeni, into engajwayelekile futhi ekhomba ukuthi kukhona okwenzekayo esilwaneni, yize kungenye into esingaziqondisa ngayo ukuze sazi uma inja yethu yenzeka okuthile, uma lokhu qala ukuzungeza ngemibuthano.
Okokuqala, uma inja iqala ukwenza lokhu, kufanele sibheke ukuthi ngabe lesi simo sinokuthile okuphathelene nokusabela okuthile entweni engaphandle kuye, ngokwesibonelo, uma ejaha okuthile, uma ebheka umlandeli wophahla noma okuthile okufana nakho. Uma inja yakho ihamba izungeza ngaphandle kokuphazamiseka kwangaphandle, kufanele ufune usizo kudokotela wezilwane, lokhu kungezinye zezimbangela zokuthi inja yakho ihambe izungeza.
Kufanele ukhumbule ukuthi lesi simo sengqondo, lapho enaso esekhulile, kungenzeka ukuthi singakhathazeki kangako njengasemdlwane. Eqinisweni, kunezizathu ezimbalwa zokuthi kungani inja endala ingagingqika ilume umsila wayo. Futhi yilezi:
1 Izimbangela eziyinhloko
1.1 Izinkinga zempilo
1.2 Ubudala obuthuthukisiwe
1.3 Ukuziphatha okuphoqelekile
1.6 Umjaho wayo
2 Izimbangela zomzimba
3 Izimbangela zangaphandle
4 Izimbangela ezingaphansi
4.1 Incane kakhulu
5 Yini okufanele uyenze uma inja yami indala futhi ihamba ngemibuthano?
6 Kungani inja yami ingayeki ukuhambahamba endlini?
7 Inja yami iyaziphendukela futhi ilume umsila wayo
8 Kungani inja yami ihamba emaceleni futhi nasemibuthanweni?
9 Inja edidekile, kungaba yini imbangela yokuthi kungani ihamba izungeza?
10 Ukuwohloka komqondo kweSenile, kungaba yini imbangela yokuthi uhambe ngeziyingi?
11 Izifo ezingenzeka ezenza inja yami ihambe izungeza
12 Inja yami iyajika iwa
13 Lapho lokhu kungaba yisizathu sokukhathazeka ukujikeleza
Uma inja yakho ihamba imibuthano ngaphandle kokuphazamiseka kwangaphandle, kufanele ufune usizo kudokotela wezilwaneLezi ngezinye zezimbangela zokuthi kungani inja yakho ihamba imibuthano.
Thatha inja yakho uye nayo kudokotela wezilwane ukuze kukhishwe izinkinga zezempilo, ngoba uma inja isezinhlungwini, ingahamba imibuthano ukukhombisa ukungakhululeki. Ezinye izifo inja yethu engase ihlupheke ngazo ukutheleleka ezindlebeni, izinkinga zamehlo noma ukuphazamiseka kwemizwa.
Njengabantu, izinja ezindala nazo zinenkinga yokuwohloka komqondo, lokhu kungadala ukudideka noma ukukhohlwa. Inja ingabe isihamba izungeza sengathi ilahlekile, igqolozele eminyango noma emakhoneni endlu bese iveza ushintsho ebuntwini.
Ungakhohlwa ukuthi yikuphi ukudla, amanzi noma ukuphi noma indle ngoba izinja ezindala zidinga ukuya kudokotela wezilwane kaningi ukuqinisekisa ukuthi impilo yazo isesikhathini, ngakho khumbula ukuyinakekela kahle inja yakho endala.
Izinkinga ezivamile ezinjeni ezindala
Izinja eziningi zinokuphoqelelwa kwezinto ezithile futhi ukuhamba ngemibuthano kungenye yazo. Imisindo emikhulu, izimo ezingalindelekile, noma ukwethuka kungadala lokhu kuziphatha., ngisho ukukhathazeka ngokwehlukana kungasiza futhi kulokhu.
Lapho inja yakho ibonisa lokhu kuziphatha, zama ukususa okushiya ikhathazekile noma iguqule imvelo. Zama ukumphazamisa ngethoyizi noma ngokunye angakudla futhi ugweme ukumdlalisa "nokumduduza", ngoba uzobe uqinisa le ndlela yokuziphatha futhi uzobona ukuthi njalo lapho ekwenza, uthola umklomelo.
Ukuvivinya umzimba kubalulekile empilweni yenja nengqondo, ngoba Izinja ezingakutholi ukuzivocavoca umzimba ngokwanele zingaqala ukuhamba ngemibuthano ukunciphisa ukukhungatheka.
Cabanga ngokumyisa esibayeni ukuze uchithe izinsuku ezimbalwa ngesonto udlala nezinye izinja futhi usebenzise amandla futhi ukhumbule, ungalwi nenja yakho lapho iqala ukuhamba ngemijikelezo, ngoba lokhu kuziphatha kuyindlela yokuthi akutshele ukuthi kukhona okuthile akulungile. kulungile kuye.
Zonke lezi zingxabano zokuziphatha zifakiwe ngaphakathi komqondo wokukhathazeka, okungenye yezizathu ezinkulu zokuthi kungani inja yethu iziphendukela.
Uma inja yakho ikhathazeke kakhulu, kungenzeka ukuthi uzobona nezinye izinhlobo zezinkinga esimweni sayo sengqondo., okuvame ukuhunyushelwa ekubambeni izinto njalo endlini, njengefenisha, noma ungazizwa zikhonkotha ngokweqile.
Lokhu kuziphatha nakho kungaba nesixazululo uma sinweba, ngangokunokwenzeka, ukuhamba kwabo, ngakho-ke izinja zivivinya kakhulu futhi ngale ndlela zikhulule konke ukungezwani nengcindezi, ukubhekana nesimo sokuba sekhaya ngaphandle kokukhathazeka okungaka.
Kwenzekani uma inja ingathathwanga ukuhamba?
Phakathi kwenani elikhulu lezici ezingadala inja yakho ukuthi iziphathe ngale ndlela exakile, kufanele futhi unake ukuthi uhlobo ngalunye lunemingcele ethile yokuziphatha futhi lokhu kungaba imbangela enkulu yokujika okuyindilinga okwenziwa yinja yakho.
Lokhu kusho ukuthi izinja zezinhlobo ezithile zivame ukuba nohlobo oluthile lokuthambekela ekubeni nalokhu kuziphatha, phakathi kwayo esingagqamisa abelusi baseJalimane, okuthi, ngaphezu kokuaziwa ngokuthi iningi lama-specimens abo ajwayele ukuzungeza imibuthano, nabo badume ngokwenza izimbobo ezinkulu.
Olunye uhlobo oluvame ukuba nezici ezifanayo ngofuzo yi- I-Bull Terrier, kepha kulokhu, imvamisa benza umzila obanzi emibuthanweni yabo futhi njalo ngejubane.
Lapho inja yenza lokhu kuziphatha, ngesikhathi esithile igcina ikufaka ngaphakathi, ilahlekelwe umqondo wokuthi ikwenzelani. Ngamanye amazwi, ukwenza njengokujwayelekile kuye, kepha ngaphandle kokwenza nokuhlola, noma neqiniso lokufuna okuthile ngokukhethekile. Sibe sesiphenduka isicubu sesilwane okuthi, noma kungeyona into embi, singaba umkhuba onganconyiwe, ikakhulukazi uma uqala ukuzilimaza.
Kwenzeka kangakanani lokhu kuziphatha? Kungenzeka uma inja ingenakho ukunakekelwa okwanele, okungukuthi, lapho ibhorekile, ivaliwe ngaso sonke isikhathi, icindezelekile noma ikhathazekile, ayinayo intshisekelo noma imane nje ayidlali. Kulezo zimo, kubo kuba yindlela yokuphunyuka ukwenza okuhlukile.
Inkinga ukuthi, ezimweni eziningi, ingazicwenga noma izilimaze kanzima ngokubamba umsila wayo. Ungayihlephula. Ngakho-ke, ochwepheshe bancoma ukuthi uma lo mkhuba ungejwayelekile, into engcono kakhulu ongayenza ukuya kuchwepheshe wezemvelo ukuze awususe ekuziphatheni kwawo.
Ukuthi inja iyaziphendukela futhi ilume umsila wayo nakho kungaba nesizathu sokuba semvelo ngokomzimba. Futhi, kulokhu, kungabaluleka ngoba kungathinta impilo yakho. Futhi ukuthi, ezinye izinja, lapho banezinkinga zezindlala zangasese, baba nalo mkhuba njengendlela yokuzikhulula (ngoba abazama ukukwenza ukufika kuleyo ndawo).
Kungenzeka ngenxa yokutheleleka, izimuncagazi emathunjini, njll. futhi phakathi kwezimpawu, ngaphezu kokucasula nokuvuvukala kwendawo yangasese, kuzoba khona nokubonakala kokulunywa. Eqinisweni, isithombe senja ekhasa ngesinqe sayo singase sifike engqondweni njengamanje. Noma kungenzeka kungenxa yamazeze esabekayo, afakwe kuleyo ndawo futhi aveza isidingo esinjalo sokuklwebha aze agcine eluma ukufinyelela kuleyo ndawo futhi akwazi ukuzikhulula.
Kulezi zimo, kuyalulekwa ukuthi umyise kudokotela wezilwane ukuze akwazi ukuhlola ukuthi yini lesi sifo nokuthi siyini isizathu saso, ukuze kuqedwe inkinga nokuyeka lo mkhuba. Ngokujwayelekile ozokwenza ukuhlola ngokomzimba kwesilwane, kanye nokushaya kwezandla kwendawo yomsila ukubona ukuthi kukhona yini okuphukile. Ungenza futhi ukuhlolwa kwegazi, ukuhlolwa kwendle, noma kokubili.
Wake wayibona inja yakho selokhu injana yaziphendukela futhi yaluma umsila wayo futhi wahleka? Ngabe ukwenze kaninginingi futhi waba nokusabela okufanayo? Izinja ziyazenzela abaninizo, futhi lokho kusho ukuthi uma zingenza okuthile ukuze zikuthokozise, ​​zizo.
Ngalokho, kujwayelekile ukuthi ezinye izinja zikhombe lo msebenzi ngokuthile okuhle, futhi zikufunde njengeqhinga lokuthola ukunakwa kwakho futhi ngasikhathi sinye akwenze umomotheke, noma umnike okuthile ngokumbuyisela (ukuphululwa, ukuphathwa, njll.). Manje, izingozi zokulimaza umsila wakho zibalulekile. Noma uthola okuhlekisayo, kufanele uqinisekise impilo yabo ngokomzimba.
Isixazululo sisebenza nge-ethologist, ngoba uma isilwane senze le ndlela yokuziphatha ejwayelekile kuye, udinga umuntu ozolungisa lokhu kuziphatha uma ungakwazi ukukwenza ngokwakho.
Iqiniso lokuthi inja yakho ihamba ngemibuthano akusona isibonakaliso ngaso sonke isikhathi okufanele sithathe ukunaka kwethu ngokukhathazeka. Kunezilwane ezifuywayo ezingabonakala ngobuso obuhle futhi zijabule, kodwa futhi zenza lezi zinhlobo zokuhamba, ngaphandle kwalesi sisho okuthile okulimazayo, kepha kunalokho yindaba yokuziphatha okujwayelekile.
Impela usuvele uzazi zonke izimilo zenja yakho futhi uma wazi ukuthi iphilile, kepha uma ethukile ngokujwayelekile, kungenzeka kakhulu ukuthi agijime azungeze ngendlela yenjabulo, ngoba okuthile kudala isikhuthazi esithile.
Lesi simo singakhonjiswa yinjabulo izinja eziningi ezijwayele ukuyikhombisa uma siyomjikijela ibhola ukuze ayilande. Sizobona ukuthi lokhu kukhuthazeka okwenziwa yinja kungenxa yokuthi kuzoziphendukela kukodwa, ngendlela yokukhathazeka nenjabulo ekusebenzisaneni nawe nokudlala.
Njengoba sikutshela nje ukuthi eminyakeni yobudala, ukujika kwenja kungaba yisizathu sezinkinga zempilo, kufanele futhi kwaziwe ukuthi Uma umdlwane wakho uqala ukuziphendukela, akufanele ukhathazeke kakhulu, ngoba lokhu akusho into embi, kepha amandla okudlala esilwane sakho esincane.
Izinja ezincane zivamise ukuba nomqondo wokudlala wokujaha umsila wazo, kuthi ngomzamo wokuwufinyelela ziziphendukele wona kaningi, ngakolunye uhlangothi nakwezinye. Lokhu akumele i-pathology futhi uzobona kalula ukuthi ngumdlalo.
Ukuhamba kwemibuthano yezinja zethu akusho lutho olubi, inqobo nje uma kungaphindaphindeki ngokwanele okusho ukuphazamiseka empilweni yabo.
Yini okufanele uyenze uma inja yami indala futhi ihamba ngemibuthano?
Ukuziphatha kokuhamba emibuthanweni kungabonwa besebancane lapho, njengoba sishilo ngaphambili, konke kuyingxenye yomdlalo. Kepha uma inja yakho indala futhi ihamba isiyingi, Impela kuyisifo esaziwayo esaziwa ngokuthi yiCognitive Dysfunction Syndrome.
Ukuze uqonde ukuxhumana okuseduze kwalesi sifo se-canine nokuguga kwezinja, singasho ukuthi lesi sifo sifana kakhulu ne-Alzheimer's, abantu abavame ukugula ngenxa yokuguga, kanye nohlu lwezimpawu izinja zethu ezihluphekayo Kungenzeka ukuthi uhlupheka ngakho, kepha okunye okuvame kakhulu ukwenza ukunyakaza okuyindilinga.
Izinja zeminyaka esezihambile ezihlushwa yilesi sifo azikwazi ukwelashwa, njengoba ziqhubeka futhi zingokwemvelo ukuguga. Kodwa kunezindlela zokwelapha ezahlukahlukene, okunye okwemvelo, njengokushintsha kwemikhuba yenja, ukuzivumelanisa nokubhekana kangcono nalesi sifo futhi kwezinye izimo, ukuphathwa kwemithi ethile kuvame ukusetshenziswa.
Kungani inja yami ingayeki ukuhambahamba endlini?
Ungazithola usezimweni eziningi lapho othandekayo wakho engakwazi ukuyeka ukuzungeza nokuzungeza indlu yakho. Lokhu, obekungukuziphatha okungajwayelekile kuye futhi manje okukudonsayo, kungabangelwa izimbangela ezahlukahlukene, eziningi zazo zingokwemvelo ngokuphelele, kepha ezinye kungenzeka ukuthi zihlobene nezinkinga empilweni yakho noma enhlalakahleni okufanele uzelaphe.
Yingakho Sincoma ukuthi ekuqaleni ususe konke ukungabaza ongaziqeda ngokwakho. Bheka ukuthi ayihambi yini ifuna into evinjiwe kwenye indawo noma efihlwe ngemuva kwefenisha, into ejwayele ukubenza baqalaze.
Uma uthola inkinga lapho, usuvele ususile ukungabaza kwesifo. Kepha uma ukujika kwendlu yakho kuqhubeka, kuyanconywa ukuthi uvakashele udokotela wezilwane, ukuthola ukuxilongwa okunembile.
Inja yami iyaziphendukela futhi ilume umsila wayo
Mhlawumbe lesi simo yiso okufanele sikukhathaze kancane, ngoba izinja zivame ukwenza lokhu, ikakhulukazi uma ziyimidlwane futhi ziphakathi kokuhlola. Akumangazi nokuthi lezi zijikeleza ngaphambi kokuphonswa kwenye indawo. Kuyinto abayenza ngokujwayelekile.
Kungani inja yami ihamba emaceleni futhi nasemibuthanweni?
Ukubonisana nodokotela wezilwane ngalezi zinkinga kuyinto yokuqala okufanele uyenze, kodwa Uma inja yakho ihamba emaceleni nasemibuthanweni, kungenzeka kakhulu ukuthi ihlushwa uhlobo oluthile lwesifo noma isimo.
Phakathi kweziphazamiso ezingadalwa yileli gaitided loit, kungaba nenkinga yokudakwa, okuyenza yenze ukunyakaza okungazibandakanyi, futhi ingahle ihlobene nediski ye-herniated enjeni, okwenza kube nzima ukuthi ihambe.
Inja edidekile, kungaba yini imbangela yokuthi kungani ihamba izungeza?
Lapho izinja zethu ziphakathi noma zindala, izicubu zazo ze-neuronal zingawohloka, kuphakamise lokhu okushiwo ngenhla iCognitive Dysfunction Syndrome. Ukwehla kwala ma-neurotransmitters kwenza inja ibonakale ididekile, into engaba nzima ngokwengeziwe ngeminyaka.
Lokhu kuphazamiseka kungaba esinye sezimbangela eziqondile wokuhamba emibuthanweni yesilwane sethu.
Ukuwohloka komqondo kweSenile, kungaba yini imbangela yokuthi uhambe ngeziyingi?
Ukuwohloka komqondo kukaSenile impela kungenye yezimbangela ezivamile kungani izinja zinokuziphatha. Lokhu kwenzeka eminyakeni yobudala esezingeni eliphezulu futhi kuvame ukuzuma ngokwengeziwe ezinjeni ezinkulu, ngenxa yokuthi zikhula ngaphambi kwesikhathi.
Ukuwohloka komqondo eSenile ezinjeni eziningi kuvame kakhulu phakathi kweminyaka eyi-10 nengu-11, kepha ezinjeni ezinkulu kungenzeka ngemuva kweminyaka engu-7.
Izifo ezingenzeka ezenza inja yami ihambe izungeza
Ngaphezu kwazo zonke izingxabano zokuziphatha esizishilo, kukhona nezinye izifo noma ukuphazamiseka okungenza inja yakho ihambe emibuthanweni futhi yile elandelayo:
Mhlawumbe lesi simo yiso okufanele sikukhathaze kancane, ngoba izinja zivame ukwenza lokhu, ikakhulukazi uma ziyimidlwane futhi ziphakathi kokuhlola. Akuvamile futhi ukuthi lezi zijikeleze ngaphambi kokuphonswa kwenye indawo. Kuyinto abayenza ngokujwayelekile.
Inja yami iyajika iwa
Inja yakho ilahlekelwe ibhalansi kungahle kube ngenxa yenkinga endlebeni yakho yangaphakathi, okuvame ukubhekiselwa ekutheleleni. Lapho uzobona lokhu kubonakala njengophawu lwesikhalazo ngobuhlungu.
Esinye isizathu kungaba i-Vestibular Syndrome ezinjeni. Isimo esivame ukuvela ezinjeni esezikhulile futhi sinezimpawu eziningi, phakathi kwazo ukuwa okungazelelwe kwesilwane sethu.
Inja ikhombisa uhlelo lapho i-vestibulo cochlear nerve nendlebe yangaphakathi isebenza khona ndawonye, ​​ixhunywe ezingxenyeni ezahlukahlukene zesistimu yayo yezinzwa, ebizwa nge-Vestibular System.
Ukusebenza okungalungile kwanoma iyiphi yalezi zingxenye yikhona okwenza i-Vestibular Syndrome, okuyiyona kungenzeka ezinjeni zanoma yimuphi ubudala futhi ithola izimbangela ku-acute otitis futhi i-hypothyroidism, ethula ukungapheli kwezimpawu.
Phakathi kwalezi zimpawu kukhona ikhanda elitshekile, ukudideka, ukulahlekelwa ibhalansi, ubunzima bokudla, ukuzikhulula noma ukuchama, ukukhipha amathe nokucasula izinzwa zendlebe yangaphakathi nokuhamba ngezindilinga phakathi kwezinye eziningi.
Lapho lokhu kungaba yisizathu sokukhathazeka ukujikeleza
Njengoba sishilo ngaphambili, ukubonisana nodokotela wezilwane kuhlale kudingekile, ukwazi ukuthi ukuhamba ngezindilinga kuyakhathaza noma cha. Uma kwenzeka ukuthi, ngenxa yalesi sibonakaliso, bathola isithombe sokuwohloka komqondo okubuthakathaka nesifo se-vestibular nakho konke ukuphazamiseka okungalethwa yibo, lokho kungaba yinkinga yokukhathazeka okukhulu nokwelashwa okunembile nokusheshayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Kungani inja yami izula izungeza?
Inja yami yaqala ukukwenza lokhu cishe inyanga edlule, iyahamba iyajikeleza, angazi ukuthi ime nini ngoba ngiyayeka ukuyibona futhi ngibonile futhi sengathi ayibonanga ukuthi kungani ikhubeka ezintweni, lokho akusikho ejwayelekile kepha Yisifo esithile uma kungekho okukuhluphayo, kuhle kube yisikhathi besakha indlu ngemuva kweyami futhi kulokhu engikuphawulayo babanga umsindo usuku lonke kungaba yilokho futhi nginecala impela ngoba ukungayisusi ohambweni sinenye inja emgcina enkampanini kodwa kusobala ukuthi lokho akunandaba, angazi noma lokhu kungathuthukiswa noma kwelapheke ngenye indlela yokwelashwa noma akunjalo?
Izintshebe zezinja zenzelani?